Wargayska Marka Oo Soo Bandhigay Sida Lionel Messi Oo Uu Soo Dhaliyay Laba Jibaarka Goolasha Ay Soo Dhaliyeen Dhamaan Xidigaha Weerarka Real Madrid. – WWW.Gool24.net
Wargayska Marka Oo Soo Bandhigay Sida Lionel Messi Oo Uu Soo Dhaliyay Laba Jibaarka Goolasha Ay Soo Dhaliyeen Dhamaan Xidigaha Weerarka Real Madrid.
Wargayska Madrid ee Madrid ka soo baxa ayaa maalmihii ugu danbeeyay warbixino badan ka diyaarinayay xaalada xun ee ay ku jirto kooxda Zinedine Zidane ee Real Madrid, wuxuuna wargayska Marca soo qaata in waxyaabaha dhibta ugu wayn ku ah Real Madrid ay tahay qaab ciyaareedka liita ee xidigaha weerarka Los Blancos iyaga oo barbar dhig ku sameeyay goolasha uu Messi u soo dhaliyay kooxdiisa Barcelona ee horyaalka La Liga.
Waxaa warbiixnta Marca lagu sheegay in Lionel Messi uu dhaliyay tiro goolal ah oo ku laba jibaarmaysa dhamaan goolasha ay dhaliyeen xidigaha uu Zidane weerarka kooxdiisa u soo adeegsaday tobankii kulan ee horyaalka La Liga laga soo ciyaaray.
Xidiga ree Argentina ayaa horyaalka Laliga ka soo dhaliyay 12 gool, waana tiro laba jeer ku soo laabmaysa goolasha ay dhaliyeen dhamaan xidigaha weerarka uga ciyaara kooxda Estadio Santiago Bernabeu ka dhisan ee Real Madrid, waana sabab wayn oo ay Madrid u soo awoodi wayday in ay sii wataan qaab ciyaareedkii laga filayay.
Waa xaqiiq in dhaawacyo iyo ganaaxyo ay Real Madrid ka dhigtay kuwo aan si fiican u soo helin adeega xidigaha weerarka kooxdeeda ugu ciyaara laakiin taasi ma noqonayso mid cudur daar rasmi ah siinaysa dhamaan gool dhaliyaasha Real Madrid oo xataa kulamadii ay ciyaareen aan muujin awoodii gool dhalineed ee looga bartay.
Tusaale ahaan Cristiano Ronaldo oo ahaa mishiinka gool dhalinta ay Los Blancos ku tiirsan tahay ayaa lix kulan ku soo dhaliyay 1 gool oo horyaalka La Liga ah taas oo la micno ah in xidiga ree Portugal uu 540 daqiiqo uu ku soo dhalyay hal gool oo kaliya isaga oo seegay afartii kulan ee ugu horeeyay La Liga oo uu ganaax ku maqnaa.
Culayska ugu wayn ee ay Real Madrid ka dareemayso gool yaraanta soo foodsaartay waxaa doorka ugu wayn ku leh in Ronaldo aanu ku jirin qaab ciyaareedkiisii fiicnaa ee gool dhalinta uu kooxdiisa ugu soo caawinayay.
Laakiin Gareth Bale oo haddaba dhaawac ku maqan ayaa soo dhaliyay 2 gool oo kaliya oo horyaalka La Liga ah isaga oo xataa markii uu taamka ahaa aan ku jirin xaalad fiican. Waxayna tani la micno tahay in shanta gool dhaliye ee Madrid oo kala ah Ronaldo, Benzema, Moyral, Lucas iyo Bale ay dhexdooda horyaalka la liga ka soo dhaliyeen 6 gool oo kaliya taas oo ah kala badhka goolasha uu Messi soo dhaliyay ee 12 ka ah.
Wargayska Marca ayaa farqiga Barcelona iyo Real Madrid u dhexeeya ku tilmaamay abaarta gool la’aanta weerarka Madrid iyo qaab ciyaareedka fiican ee uu Messi goolasha ugu badan kaga soo caawiyay kooxdiisa isaga oo xaalado badan oo adag ka soo saaray sida kulankii Athletic Bilbao ee ugu danbeeyay oo kale.